မနက်စောစောပိုင်းမှာ ဘက်စ်ကားဟာ မိုးပျံ ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်ကနေ လမ်းချော် ပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာ အလုံပိတ် ဘန်းကားတစီးပေါ်ကို ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး ဘန်းကားရဲ့ ယာဉ်မောင်းလည်း ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး သွားပါ တယ်။
ဖိလစ်ပိုင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကတော့ လိုင်းကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာအပါအ၀င် အနည်းဆုံး လူ အနည်းဆုံး ၈ ယောက် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မနက်စောစောပိုင်းမှာ ဗုံးကွဲတဲ့ အသံလို အလွန် ကျယ်လောင်တဲ့အသံကို ကြားခဲ့ရပြီးနောက် အခင်းဖြစ် တဲ့နေရာ ကို သွားကြည့်ခဲ့ပြီး ကားထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လူတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင် တယောက် က ပြောပြပါတယ်။
မတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အာဏာပိုင်တွေက ဆက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ရေစိုနေ တာ က အကြောင်းရင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကလည်း ဒီလို ပုံစံ လိုင်းကားမတော်တဆမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူ ၃ ယောက် သေဆုံးခဲ့ ပါ တယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်း၊ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ အရာရှိတွေဟာ မြို့တော် ပြုံးယမ်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကင်ဂျုံအီးရဲ့ ဈာပန ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။
လက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းရဲ့ဖခင် အရင် ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီး သေဆုံးမှု ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ် ခုလို ဂုဏ်ပြုတာပါ။
ဖခင် ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကင်ဂျုံအီးနဲ့ အဘိုးဖြစ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတည်ထောင်သူ ကင်အီဆွန်းတို့ရဲ့ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပြည်သူတွေ ဒီနေ့ ပန်းခွေချ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ အကြီးစား စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်တွေက ကင်ဂျုံအန်းကို သစ္စာခံကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်သစ် ကင်ဂျုံအန်းဟာ သူ အာဏာရလာတဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ၂ စီးနဲ့ နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုတရပ် လုပ်ခဲ့လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ကတော့ သူ့အဒေါ်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တုိုင်းပြည်တွင်း ဒုတိယ သြဇာ အကြီးဆုံးသူ ဂျန်ဆောင်တိတ်ကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဒေါ်ဖြစ်သူကတော့ အစိုးရအဖွဲ့တွင်း သြဇာရှိတဲ့ နေရာမှာ ဆက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတော့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးသုတ်သင်မှု အပြီးမှာ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ လာမယ့်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စစ်ရေးအရ ရန်စမှု လုပ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း စိုးရိမ်နေပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီနှောင်းပိုင်းကနေ မတ်လအစောပိုင်းကြားမှာ ဖြစ်နုိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ကင်မင်းဆွခ်က ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မဟာမိတ် အမေရိကန်ကို နျူးကလီးယားစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပြပွဲကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တော့လေမလား
ဒီမတိုင်ခင်က အဲဒီနေရာမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အချင်းချင်းကြား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာ၊ လောင်းကစားတာနဲ့ ပစ္စည်းပျောက်ရှတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိပြီး အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်က ပြည်သူတွေ အသက်အိုးအိမ် မလုံခြုံကြောင်း တိုင်ကြားတဲ့အတွက် လာရောက် စစ်ဆေးရှင်းလင်းရတာလို့ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနဟာ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်လိုသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မှာ အဓိကထား စိစစ်ရွေးချယ် ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေအနေနဲ့ တည်ဆောက်လိုတဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်နေရာဒေသ၊ ရေအား လျှပ်စစ်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဘယ်အမျိုးစား၊ အသုံးပြုတဲ့ စက်ရုံ တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပြီး ကုမ္ပဏီအချက်အလက်နဲ့တကွ ၀န်ကြီးဌာနမှာ လာရောက် ဆွေးနွေး လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျေးရွာတွေရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်ပဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် အလွန် များပြားကာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်း အဓိက အဟန့်အတား ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တခု ဖြစ်နေပါတယ်။
လက်ရှိ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(အေဒီဘီ)၊ တရုတ် EXAM ဘဏ်တွေကနေ ချေးငွေတွေ ရယူပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်တာ၊ နဂို ရှိပြီးသားစနစ်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုထွက်လာအောင် လုပ်တာ စတာတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲဖို့ အပါအ၀င် အနှစ်သာရတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ အကြံပြုလွှာကို လွှတ်တော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီထံ မကြာခင် ပေးပို့သွားမယ်လို့ ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီး သဘောထား သုံးချက်ပါဝင်တဲ့ အကြံပြုချက်ကို လွှတ်တော်ကော်မတီထံ ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်မှာ ပေးပို့သွားမယ်လို့ ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဂျင်မီက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့က သဘောတရားကို အခြေခံပြီးတော့ ပြောမှာပါ။ ပုဒ်မ ၁ ခုချင်းဆီကို လိုက်ပြီး မပြောတော့ဘူး။ သဘောတရားကတော့ အချက် ၃ ချက်ကို ထောက်ပြမယ်။ ၁ အချက်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဟာ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်တချက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု နည်းပြီးတော့ ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဦးတည်ရမယ်။ တတိယအချက်က ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ လွှမ်းမိုးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီအချက် ၃ ချက်အပေါ် အခြေခံပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထား အယူအဆကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။”
ဒီလိုတင်ပြရာမှာ လွှတ်တော်ကော်မတီအပြင် တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဆီကိုပါ လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်း တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁၀၉ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တွေ ပေးပို့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါ။
လတ်တလော ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေက ရရှိထားတဲ့ အကြံပြုစာပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ရရှိသွားပြီလို့လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွေ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် သွားမယ့် ဘယ်သူမဆိုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဦးဂျင်မီက ပြောပါတယ်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သဘောကို မတူခဲ့ဘူး။ လက်ကို မခံခဲ့ဘူး။ မဲကိုမထည့်ခဲ့ဘူး။ သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ လူတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူထုဆန္ဒအမှန်ကို လက်ခံပြီလား။ လူထုဆန္ဒအမှန်အတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေတော့ ရှိလာတာပေါ့။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မည်သူမဆို ပြင်ဆင်မယ့်သူတွေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနောက်ပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကို ပေးနိုင်မယ့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သွားမယ့် သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်မဆို ကျနော်တို့က ထောက်ခံ အားပေးသွားမယ်။”
ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီးအပါအ၀င် ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံဘဲ အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးသစ်လက်ထဲမှာမှ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာကြတာပါ။
ရွှေထားဝယ် ခရီးသည်တင် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် (၁)ဦးသေ (၅)ဦးဒဏ်ရာရ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ မရမ်းချောင်းရွာ၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၅/၆)နှင့် (၉၇/၆)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား ကြောင်းသတင်းအရ ကျိုက်ထိုရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ သထုံမြို့နယ်၊ သုဓမ္မ၀တီမြို့သစ်နေ သက်နိုင်ဝင်း(၂၉)နှစ် မောင်းနှင်လာသော ၆က/xxxxxx ဖောအမျိုးအစား ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးပိုင် အပြာရောင်ယာဉ်သည် ရှေ့မှမောင်းနှင် နေသောယာဉ်အားကျော်တက်စဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောရှိ ရန်ကုန်မှ မော်လမြိုင်သို့ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ အေးမြကန်သာရပ်ကွက်၊ အင်းယားမြိုင်လမ်းနေ ဦးတင်မြင့်(၅၀)နှစ် မောင်းနှင် လာသော ယာဉ်အမှတ် ၈စ/xxxxx ဖူဆိုအမျိုးအစား ““ရွှေထားဝယ်”” ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သက်နိုင်ဝင်းသည်အခင်းဖြစ် နေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖောယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူ သထုံမြို့နယ်၊ သုဓမ္မ၀တီမြို့သစ်နေ အေးအေးအောင်(၂၈)နှစ်ပါ ၃ ဦးတွင် ယာလက်ခုံ/ယာနားထင်ပြတ်ရှ၊ ယာဒူးခေါင်းဖူးရောင် ဒဏ်ရာများအသီးသီးရရှိသည့်အပြင် ဖူဆိုယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသည့် ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ အေးမြကန်သာရပ်ကွက်၊ အင်းယားမြိုင်လမ်းနေ စိုးရန်ကျော် (၂၀)နှစ်ပါ(၂)ဦးတွင် ယာဘက်ခြေဖမိုး ဖူးရောင်၊ ၀ဲနားထင်၊ ၀ဲ/ယာခြေသလုံးပြတ်ရှဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့သောကြောင့် သက်နိုင်ဝင်းအား အပိုင်နယ်မြေဖြစ်သည့် သိမ်ဇရပ်နယ်မြေရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၂၃/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇/၃၃၈/၃၀၄-က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သီလ၀ါစီးပွားရေးဇုန် ပြည်သူပါဝင်နိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ထုတ်ပြန်
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူ အစုရှယ်ယာ ၀ယ်ယူ ပါဝင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သည်နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ မြန်မာဘက်က ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန်ဘက်က ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ထည့်ဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဘက်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အားလုံးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရ၊ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီ ၉ ခုက ၁ ခုကို ၅ ရာခိုင်နှုန်းစီ၊ ကျန် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အများပြည်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစိုးရ ထည့်ဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေဟာ မြေတန်ဖိုး စိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ တွက်ချက်မှာ ဖြစ်သလို အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ၉ ခုကလည်း သီးခြားစီ ပြည်သူတွေကို အစုရှယ်ယာ ထုတ်ရောင်းဦးမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် အစုရှယ်ယာ ထုတ်ရောင်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကိုတော့ မရေးဆွဲ မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Ferrari, Lamborghini, Audi A8 တို့အပြင် အခြားသော ကားများ ရှိနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့ မှာ နောက်ထပ် အသစ် ရောက်လာတဲ့ ရဲကား တစ်မျိုးကတော့ Mercedes Benz G Class Wagon ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ကားပါ။ Sport car chasing အတွက်တင် မဟုတ်တော့ ပဲ ဘော်ဒီကို သုံးပြီး အတွန်းအတိုက်အတွက်ပါ အကြမ်းခံ မယ့်ကား မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီ မိုင် ၁၅၀ အထိ အမြန်မောင်းနှင် နိုင် ပါမယ်။ ဂျာမနီ မာစီဒီးဆီက ယူအေအီးအစိုးရ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် မှာယူ ထားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အစီးရေ ဘယ်လောက်ရှိ တယ် ဆိုတာ မသိပေမယ့် ရာဂဏန်း အထက်မှာ ရှိမယ်ဆိုတာ အားလုံး ခန့်မှန်း ယုံကြည်ထားကြ ပါတယ်။ ရဲကား ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ပုံစံ ပြောင်းလဲ မှုလည်း ရှိပါတယ်။
အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်က အစ ပြန်လည် ပြောင်းလဲပေးထား တာပါ။ ရဲကား တစ်စီးနဲ့ တစ်စီး ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေ လည်း ပြန်လည် ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ်။ အကြမ်းလည်း ပိုခံအေင် ထုတ်နေကျ G Class မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကိုယ်ထည် သတ္တုသားလည်း မဟုတ်တာမို့ ဈေးလည်း တက်လာမှာပါ။ ကာလတန်ဖိုး အားဖြင့် တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်မှာ ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
shaniအဲဒီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမှာ ပြုလုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားတယ်လို့ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုရေးရာ နာယက အဖွဲ့ဝင် ဦးသာဇုံက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ စစ်တပ်ပိုင် အင်းဝဘဏ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မနက်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ တပ်မတော် အရာရှိတဦး ဓားကိုင် ၀င်ရောက်လာပြီး အနုကြမ်းစီး လုယက်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ထား ပါတယ်။
အနုကြမ်းစီးသူက ဘဏ်မန်နေဂျာ ဒေါ်မိမိယဉ်ကို ဓားနဲ့ထောက်ပြီး ဘဏ်ကောင်တာမှာ ရှိတဲ့ ငွေတွေကို ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထဲ့ခိုင်းရာမှာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ငြိမ်နေကြတုန်း ဓားကို ကောင်တာပေါ် လှမ်းတင်ထားခိုက် မန်နေဂျာက ဓားကို တွန်းချ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ ရောက်လာပြီး ဖမ်းဆီး ရဲစခန်းကို ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အနုကြမ်းစီး လုယက်သူဟာ အမှတ် ၆၀၀၆ တင့်ကားတပ်ရင်း၊ ကန့်ဘလူမှ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိ ဝေယံမျိုးကျော် အသက် ( ၂၆ ) နှစ် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အခင်းဖြစ်နေရာကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ မိတ္ထီလာမြို့၊ သုခ သမဂ္ဂီအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်နန်း က “ဘဏ်ထဲကို ဓားတချောင်းတည်းနဲ့ ၀င်လုတယ်။ လုတော့ ဘဏ်ထဲက ဘဏ်စာရေးမတွေက အော်တာပေါ့။ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတွေ ဘဏ်ထဲ ၀င်သွားတယ်။ နောက် ရဲနဲ့ နပန်းလုံးပြီး ၀င်ဖမ်းလိုက်တော့ ဓားတချောင်းတည်းနဲ့ ၀င်လုတယ်ပြောတယ်။ အခု အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှာ တရားခံကို ဖမ်းထားတယ်။ တရားခံကို ကြိုးနဲ့တုပ် ခေါင်းစွပ်စွပ်ပြီး ရဲစခန်းကို ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းရှေ့မှာ သတင်းထောက်တွေ စောင့်နေတယ်။ ဘယ်သူမှ ၀င်ခွင့်မပေးဘူး။ မေးတာလည်း မဖြေဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာ အင်းဝဘဏ်ဟာ မြို့ရဲ့ လူစည်ကားတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိပြီး မိတ္ထီလာမြို့မှာရှိတဲ့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်က အဓိကအသုံးပြုနေတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘဏ်မှာ စစ်သား နှစ်ယောက်၊ ရဲတပ်သား နှစ်ယောက် လုံခြုံရေး စောင့်ကြပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေမှု အခြေအနေကို သိရဖို့ မိတ္ထီလာ အမှတ် (၂) ရဲစခန်းကို ဒီဗွီဘီက စုံစမ်းမေးမြန်းရာမှာတော့ ဒီကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲပဲလို့ တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်း တဦးက ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၄ ခုလောက် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အခုလို ဖြစ်ရပ်မျိုး တခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူးလို့လည်း မြို့ခံတွေဆီက စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ လူထုဆန္ဒသဘောထား ရယူပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်
မန္တလေး ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ။ ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြုပြင် ပြောင်း လဲပြင်ဆင်ရန် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ မန္တလေးလူ ထု၏ဆန္ဒသဘောထားရယူပွဲကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါဆန္ဒ ခံယူပွဲသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်မည်ဖြစ် ကြောင်း မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးက ပြောသည်။
လူထုနှင့်တွေ့ဆုံမည့်အစီအစဉ်တွင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်း ပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
''ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်ထဲ မှာ ဖြစ်မှာပါ။လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ ဆုံဖို့ က ဒေါ်စုလဲကတိပေးထား တာရှိတယ်။ အောင်ပင် လယ် ကွင်း မှာ လူထု ဟောပြောပွဲလုပ်စဉ်က မန္တလေး ကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့ တစ်ခေါက်ထပ် လာမယ်လို့ ပြောသွားတာရှိတယ်'' ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အမျိုးသားဒီကိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများ၊ ခရိုင်၊ မြို့ နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပလျက်ရှိ ရာ ဆန္ဒခံယူပွဲတချို့တွင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပြီး ဥပဒေပညာရှင်များက ဆွေးနွေး မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့ လူထုတွေ့ဆုံ ပွဲအတွက် နေရာရွေးချယ်ဆဲဖြစ် သဖြင့် ကျင်းပမည့်နေရာအတိ အကျထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ဈေးအရှေ့ ပြင်ရပ်ကွက် မြို့ ဈေးကြီး အနောက်တောင်ဘက် ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမအနီး အင်းဝဘဏ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်ကတစ်ကိုယ်တော် အနုကြမ်းစီး လုယက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ အင်းဝဘဏ်မန်နေဂျာ ဒေါ်မိမိယဉ် အသက် ၄၄ နှစ် (ဘ) ဦးသောင်းသည် ဘဏ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသား ၁ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၈ ဦးတို့ နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။ ဒေါ်မိမိယဉ် သည် ၄င်း ၏ ကွန်ပျူတာထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေစဉ် ဘောင်းဘီရှည် ၊ ပြောက်ကျားအင်္ကျီဝတ်ဆင်၍ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးအားဆွဲ၍ ၀င်လာသော အမည်မသိလူတစ်ဦးကဒေါ်မိမိယဉ်၏ ကျောဘက်မှ သိုင်းဖက်ကာကျန်လက်တစ်ဘက်မှ အရိုးအသွား ၁၅၄ လက္မခန့်ရှိ ဓါးဦးချွန်ဖြင့် ထောက်ကာတစ်ယောက်မှ မလှုပ်နဲ့ အားလုံးငြိမ်ငြိမ်နေဟုဆိုကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ၀န်ထမ်းများအား မှောက်လျက်နေခိုင်းခဲ့သည်။ ထိုနောက် ၄င်းယူဆောင်လာသော ကျောပိုးအိတ်ထဲသို့ဘဏ်မှ ငွေများထည့်ခိုင်းရာ ဘဏ်ကောင်တာပေါ်တွင် ငွေမရှိသဖြင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက ငြိမ်သက်နေခဲ့သည်။
အနုကြမ်းစီးသူက ၄င်း၏ဓါးကို ကောင်တာ စားပွဲပေးတင်ပြီး ဆက်လက်ငြိမ်သက်နေရန် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများကိုပြော ဆိုခိုက် ကောင်တာပေါ်မှ ဓါးအား ဘဏ်မန်နေဂျာ က ကောက်ယူလွှင့်ပစ်ပြီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ ရောက်ရှိကာ အနုကြမ်းစီးသူအား ၀ိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးကြသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်မောင်စိုး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးစ၀်နေလင်း ၊မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ချက်ချင်းရောက်ရှိလာပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို ဦးဆောင်ကြီးကြပ်သည်။
အဆိုပါ အနုကြမ်းစီးလုယက်သူမှာ ဝေယံမျိုးကျော် ( ၂၆ )နှစ် (ဘ) ဇင်မျိုးကျော် အမှတ် ၆၀၀၆ တင့်ကားတပ်ရင်း ၊ ကန့်ဘလူ မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ၄င်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ နယ်အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မိတ္ထီလာ တပ်မတော်(အင်းဝ)ဘဏ် အနုကြမ်းစီးသူမှာ ကန့်ဘလူမြို့ ၊အမှတ်(၆၀၀၆)တင့်ကားတပ်မှ ကြီး။၄၇၄၈၀ ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၉ မှ ဗိုလ်ကြီး ဝေယံကျော်ဖြစ်သည်။ကူမဲမြို့နယ်၊မိုင်းမော တွင် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၃၆။၂၀၁၃ တို့ သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ဗိုလ်ကြီးဖြစ်သူဆို၏။
၄င်းမှာ အသက်(၂၆)နှစ်ရှိပြီး ကန့်ဘလူတွင် အိမ်ထောင် သည်ကျောင်းဆရာမရှိသည်ဆို၏။
ဗိုလ်ကြီးဝေယံမျိုးကျော်အား အမှတ်(၂)ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ်မြင့်သန်းကတရားလိုပြုလုပ်၍ ရဲစခန်း(ပ)၃၁၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ-၃၈၆ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး တရားခံအား တပ်မတော်တပ်ထိန်းတပ်သို့ လွှဲအပ်ပေးသည်။
တရားခံအားရဲစခန်းမှအထွက်တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ်၍ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည်ဟု မိတ္ထီလာမြို့ နယ်သတင်းထောက် ဦးတင်လှိုင် သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရှိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တစ်လျှောက် ခြေကုပ်ယူနေသော နယ်စပ် သောင်းကျန်းသူများ အရေး ဆွေးနွေးရန် အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်ရှိ အင်ဖာမြို့သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ရာတွင် ယင်းခရီးစဉ် အပြီး၌ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်သွားရန် ရှိကြောင်း သမ္မတရုံး အရာရှိတစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်သည် ၄င်း၏ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ် အပါအဝင် အရာရှိ ခြောက်ဦးနှင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် နေ့တွင် အင်ဖာမြို့သို့ စတင်ရောက်ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အဆိုပါခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင် ကြေညာထားခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယ သတင်းမီဒီယာ အချို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၏ ယင်းခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနယ်မြေ အတွင်း ကိန်းအောင်းနေသည့် အိန္ဒိယ သောင်းကျန် သူများကို ဖယ်ရှားရန်၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန်၊ လက်နက်မှောင်ခို ရောင်းဝယ်မှုများကို တားဆီးရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအစိုးရ အရာရှိ အချို့၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ယင်းသတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ၄င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ရှိ သောင်းကျန်းသူများ နှိမ်နင်းရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ကျောင်း (CIJW) သို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီး၊ မြန်မာတပ်မတော် ကိုလည်း လေ့ကျင့် ပေးရန်နှင့် ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်ပေးရန် တောင်းဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယ သတင်းမီဒီယာ များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ခြေကုပ်ယူထားသော အိန္ဒိယအစိုးရ ဆန့်ကျင်သောင်းကျန်သူ များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်မခံရန်နှင့် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ရန် အတွက် ယခုနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ အေကေအန်တိုနီ၊ အိန္ဒိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) တို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တခါတုန်းက တရုတ်ပြည်မှာ အသည်းကွဲ တောင်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ နေရာ တစ်ခု ရှိပါသတဲ့။ အဲဒီ တောင်ကြားဟာ အထက်ကနေ အောက်ကို တညီတညာတည်း ဓားနဲ့ ဖြတ်ပိုင်းထားသလို ၁၀ မီတာလောက် ကွဲထွက်နေပြီး တောင်ခြေ အောက်မှာတော့ မြစ်တစ်ခုက စီးနေပါတယ်။ အဲဒီ ဒေသမှာ တောင်ဆိတ်တွေ ကျက်စားလို့နေပါတယ်။
တောင်ဆိတ်တွေဟာ တခါခုန်ရင် ၆ မီတာ လောက် အကွာအဝေးကို ခုန်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ခြေတစ်ချောင်းစာ ချဖို့ နေရာရရင် ထပ်ပြီး ခုန်နိုင်ပါသတဲ့။ တနေ့မှာ တောလိုက်မုဆိုးတစ်ဖွဲ့ဟာ တောင်ဆိတ်တွေကို ဖမ်းဆီး ပစ်ခတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ တောင်ဆိတ်တွေဟာ တောင်ထိပ်ပေါ်ကို ပြေးသွားပါတယ်တဲ့။ တောင်ဆိတ် တစ်ကောင်ဟာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ အခြား ကမ်းပါးတစ်ဘက်ကို ခုန်လိုက်ပေမယ့် ၆ မီတာသာ ခုန်နိုင်တာမို့ တောင်အောက်ကို ကျသွားပြီး ရေစီးနဲ့အတူ မျောပါသွားပါတယ်။
သေဘေးကို ကြောက်ရွံ့လို့ တောင်ဆိတ်များ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်နေစဉ်မှာ တောင်ဆိတ် ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ အသံပြုပြီး တောင်ဆိတ်တွေကို ၂ ဖွဲ့ ခွဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။ မုဆိုးတွေဟာလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်နေကြသတဲ့။ မုဆိုးခေါင်းဆောင်ကလည်း လူတချို့ကို တောင်အောက်ကို သွားစောင့်ခိုင်းပြီး ခုန်ချလာမယ့် တောင်ဆိတ်တွေကို မျောပါမသွားအောင် အသင့်စောင့်ခိုင်းပြီး အချက်ပြ သေနတ်ဖောက်လိုက်ဖို့ မှာလိုက်ပါတယ်။
တောင်ဆိတ်တွေ ၂ ဖွဲ့ ခွဲလိုက်တဲ့အခါ အသက်ကြီးရင့်တဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း တောင်ဆိတ်တွေနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် တောင်ဆိတ်တွေ ဆိုပြီး ၂ ဖွဲ့ ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်တဲ့။ နောက်တော့ တောင်ဆိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးက အချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါ မျိုးဆက်သစ် တောင်ဆိတ်ထဲက တစ်ကောင်ဟာ ပြေးထွက်လာသလို မျိုးဆက်ဟောင်း တောင်ဆိတ်ထဲက တစ်ကောင်ဟာလည်း ပြေးထွက်လာပါတယ်။
နောက်တော့ မျိုးဆက်သစ် တောင်ဆိတ်ကအရင်ခုန်လိုက်ပြီး သူနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဘဲ မျိုးဆက်ဟောင်း တောင်ဆိတ်ကြီးက လိုက် ခုန်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အောက်ကနေ ခေါင်းကို ထိုးခံပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မျိုးဆက်သစ် တောင်ဆိတ်ဟာ တောင်ဆိတ်အိုကြီးကို ခေတ္တနင်းလို့ နောက်တစ်ဆင့် ထပ်ခုန်လိုက်တဲ့အခါ အခြားကမ်းပါးတစ်ဘက်ကို လျောလျောလျူလျူပဲ ရောက်သွားပါရောတဲ့။
မျိုးဆက်ဟောင်း တောင်ဆိတ်ကြီးကတော့ တောင်အောက်ကို ပြုတ်ကျပြီး အသက်စတေးသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ကောင်ပြီး တစ်ကောင် နှစ်ကောင်တွဲဆီ ခုန်လိုက် ကူးလိုက် လုပ်ပြီးတဲ့အခါ မျိုးဆက်သစ်တောင်ဆိတ်တွေ အားလုံး တစ်ဘက်ကမ်းကို ရောက်သွားခဲ့ပါပြီတဲ့။
အဲဒီမှာ တောင်ဆိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ မုဆိုးကြီးတို့ ရှိရာကို လှမ်းလာပါတယ်။ မုဆိုးကြီးက သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့အခါ တောင်ဆိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ ယိုင်သွားပေမယ့် လဲမကျသွားပါဘူးတဲ့။ (သူရဲကောင်း မှန်ရင် ယိုင်ရုံသာ ယိုင်မယ်။ ဘယ်တော့မှ မလဲပါဘူး)။
နောက်တော့ တောင်ဆိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ မုဆိုးကြီးတို့ရဲ့ မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်သွားပါသတဲ့။
ဒီပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တောင်ဆိတ် ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ မျိုးဆက်သစ်အတွက် အစတေးခံသွားတဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း တောင်ဆိတ်တွေရဲ့ သူရဲကောင်း ပီသမှုဟာ လေးစားစရာပါ။
(ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကြားဖူးပြီးကြမှာပါ။)
တစ်ခါတုန်းက တောင်ပို့ ရ်လေးတစ်ခုမှာ ကြွက်မိတ်ဆွေ နှစ်ကောင်နဲ့ အခြားကြွက်များ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ကြွက်
မိတ်ဆွေနှစ်ကောင်ကတော့ တစ်ကောင်က မိမိဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် လုံခြုံမှုရစေဖို့တွင်းကို ကိုယ်တိုင်တူးပြီး
တစ်ကောင်ကတော့ ကိုယ်တိုင် တွင်းမတူးပဲ သူများတူးထားတဲ့ တွင်းအဟောင်းတွေမှာပဲ လိုက်ပြီး ခိုအောင်း
တွင်းတူးပြီးဖို့ မလို တွင်းဟောင်းတွေ ခိုနေမယ်လို့ တွေးထားတာပါ။
ကြွက်ဖျင်းက သူ့ ကိုယ့်သူ သက်သာရာရှာချင်တာကြောင့် ခုလို နေပါသတဲ့။ သူများတွေ ပင်ပန်းကြီးစွာ နေ
စရာ တွင်းတူးနေချိန်မှာ သူကတော့ အစာလေးစားပြီး နှပ်နေရတယ်လို့ သူက တွေးပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ကြွက်
ကလေးကိုလည်း သူတို့ နေတတ်ဖို့ စည်းရုံးပါသေးတယ်။
လုံ့ လနဲ့ အမျှော်မြင် ရှိတဲ့ ကြွက်ကတော့ ကြွက်ဖျင်းဘယ်လို ပြောပြော နားမထောင်ပါဘူး။ သူ့ အလုပ်ကိုပဲ သူ
အာရုံစိုက် လုပ်နေတာပေါ့။ ငါ့တွင်းဟာ ငါ့အတွက်သာ မဟုတ် အခြားသော ကြွက်တွေအတွက်လည်း နားခိုစရာ
လေး ဖြစ်လာမယ်လို့ လည်း ခံယူထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ငါခုလိုတူးနေတာ အပန်းမကြီးပါဘူး။ ဒါဟာ ငါ့အတွက် တွင်းတူးနေကျဖြစ်လို့အလေ့အကျင့်တောင်
ရနေပါတယ်။ အများလိုပဲ တွင်းတစ်တွင်းကို ငါလည်း အမြန်တူးနိုင်တာပေါ့လို့ကြွက်ဖျင်းကို ပြောပြခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ မှာ ကြွက်တို့ နေထိုင်ရာ တောင်ပို့ ရ်လေး ပြိုကျပါတော့တယ်။ ဒီချိန်မှာ ကြွက်အားလုံးဟာ ဘ၀ကို
ကြွက်တိုင်းလိုလိုဟာ သူတို့ နေထိုင်ရာတွင်းကို တူးနိုင်ကြပေမယ့် အမြဲရေသာခိုပြီး အချောင်နေတတ်တဲ့ ကြွက်
ဖျင်းခမျာ မှာတော့ တွင်းလည်း မတူးတတ်၊ နေစရာနေရာ တွင်းဟောင်းတွေလည်း ရှာမရတော့ အခက်တွေ့ ပြီး
ဒီလိုနဲ့ အခြားကြွက်တွေဆီမှာ သူလည်း နေပါရစေဆိုပြီး အသနားခံပေမယ့် သူ့ လိုကြွက်ဖျင်း တစ်ကောင်ကို
ဘယ်ကြွက်တွေကမှ လက်မခံပါဘူး။ မိမိမှာ လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိရဲ့နဲ့ မလုပ်ပဲ အချောင်နေချင်တဲ့ ကြွက်ဖျင်းကို ငါတို့ 
တွေ မသနားလို့ ပြောလွှတ်ကုန်ပါသတဲ့။
နောက်ဆုံး လုံလနဲ့ အမျှော်မြင်ရှိတဲ့ ကြွက်ကလေးဟာ ကြွက်ဖျင်းလေးကို ခေါ်ပြီး သူ့ ကြွင်းမှာ ထားသတဲ့။ သူ့ 
အတွက်တော့ သူ့ တွင်းဟာ တခြားသူတွေ အတွက်ဆိုတဲ့ စကားကို သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။
ကျန်တဲ့ ကြွက်တွေလည်း လုံလရှိတဲ့ ကြွက်ကလေးကို လေးစားလွန်းလို့အစာပိုတွေ သယ်လာပြီး ပေးကြတာ
ပေါ့။ ကြွက်ဖျင်းလေးလည်း ဒီဖြစ်ရပ်တွေ ကြည့်ပြီး အများလို မကျင့်ကြံခဲ့လို အများရဲ့ အလေးထားမှုကို ငါဆုံး
ရှုံးလိုက်ရတာ ပါလားလို့ တွေး မိသွားပါတယ်။
ရေသာခို နေခြင်းဟာ မကောင်းပါလား၊ ခဏတာ သာယာမှုရပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးရွားစေတယ်ဆိုတာ ကြွက်
ဖျင်းတစ်ကောင် ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး နောင်တတွေ တစ်ပုံကြီးရသွားပါတယ်။
ငါဟာ တွင်းမတူးတဲ့ ကြွက်ဖျင်းပဲ။ တွင်းတူးတဲ့ ကြွက်တစ်ကောင်ဖြစ်အောင် ငါယနေ့မှ စပြီး ပြင်ဆင်ရတော့မယ်
လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ လောကမှာ ကိုယ့်တွင်း ကိုယ်တူးခြင်းသာ ကောင်းပါပေတယ် ဆိုတာကို ကြွက်
ဖျင်း တစ်ကောင် သဘောပေါက်ခဲ့ပါပြီ။
စာဖတ်သူများလည်း အတွေးထဲမှာ တွင်းတူးသောကြွက်နဲ့ တွင်းမတူးသောကြွက်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ သင်ခန်းစာ
လေး တစ်ခု ရသွားမယ်လို့ လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
Doomsday ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် ကား ဖြစ် တယ်လို့ ကြော်ငြာမှာ ထည့်ကြေညာ ထားခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပျက် ရင်တောင် သုံးနိုင်မယ့် ကားလို့ ခေါင်းစဉ်တပ် ထားခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။
ကားမှာ ဆီ ၁၁.၇၅ ဂါလံ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရထားသံလမ်းက Spike ၂ ချောင်းပေါင် မောင်းနှင်ရင် မိုင် ၁၀၀၀ ကျော် ခရီးသွားပြီး သာမန်လမ်းတွေပေါ်မှာ မိုင် ၃၅၀ ကျော် မောင်းနှင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးက ကျည်ဒဏ်၊ ဗုံးဒဏ် ခံနိုင်တဲ့ သတ္တုတွေချည်း အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတ်။ ဆိုင်ကယ်၊ ကားတွေရဲ့  အားနည်းချက်က ဆီတိုင်ကီ ပတ်လည်၊ အင်ဂျင်ပတ်လည်နားလောက် အထိအခိုက် ဖြစ်ရင် ပေါက်ကွဲ မီးလောင်တတ်တာပါပဲ။ ဒါကို မဖြစ်အောင် အထူးစီမံထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဂီယာ ၁ ချက်ထိုးကားပါပဲ။
မိသားစုဝင်ငွေနည်းတဲ့ပြဿနာက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ ဦးဘုန်း(ဓာတု)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Q. ပညာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ပညာမတတ်တဲ့မိန်းကလေး ဘ၀လုံခြုံမှုနဲ့ အာမခံချက်ရှိမှုတွေ ကွာသွားမှာပေါ့နော်ဆရာ။
A. ကွာတာပေါ့။ ပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသ်ိမ်းနိုင်လေလေ၊ ကိုယ့်ဘ၀ လုံခြုံလေလေပဲ။ ပညာနည်းလေလေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းလေလေ၊ ကိုယ့်ဘ၀မလုံခြုံလေလေပဲ။
Q. ပညာလည်းမတတ်၊ ပိုက်ဆံလည်းမရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် လမ်းမှားကိုရောက်သွားနိုင်ခြေများမယ်လို့ ထင်တယ်ဆရာ။
A. ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်နေတာက ၀င်ငွေနည်းတဲ့ပြဿနာပဲ။ မိသားစုဝင်ငွေနည်းတဲ့ပြဿနာက မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀လုံခြုံမှုကို လာပြီးတော့ ထိခိုက်စေတယ်။ မိန်းကလေးတွေက မိခင်စိတ်ရှိတဲ့အတွက် အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ စိတ်က မိန်းကလေးတွေဆီမှာ အလိုလိုနေရင်း ပေါ်ပေါက်နေတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘ၀အပျက်ခံတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် မိသားစုဝင်ငွေတိုးတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထူထောင်ဖို့ အများကြီး အကူအညီပေးသင့်တယ်။
Q. ဟုတ်တယ်ဆရာ။ တချို့ဆိုရင် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုရင်းပြီး မိဘကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့အတွက် ကုသိုလ်ပိုရသလိုလို၊ ဂုဏ်ယူနေသလိုလိုမျိုး ပြောတာလည်းရှိတယ်ဆရာ။
A. အဲဒါကတော့ ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ဆိုင်တယ်။ မိဘကိုလုပ်ကျွေးတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောဖို့လိုတာပေါ့။ အဲဒါတွေကို လူကြီးတွေက ဆုံးမသင့်တယ်။ မိဘကိုတော့ လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ခိုးမကျွေးသင့်ဘူး။ ဘ၀ကို ရင်းပြီးမကျွေးသင့်ဘူး။
အိမ်ထောင်ကျပြီးသူရော၊ မကျသေးသူတွေအတွက် ငွေစုစာအုပ်လေးတစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်က ငွေကြေးစုဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း၊ အမှတ်တရတွေ စုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်မိတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့က မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ် ငွေစုစာအုပ်တစ်အုပ်ကို မေမေက လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မအတွက် အမွေများလားပေါ့။ စာအုပ်ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ စုထားတဲ့ငွေက ကျပ် ၁ဝဝဝပဲရှိတယ်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ မေမေကို ကျွန်မကြည့်မိတော့ မေမေက ပြုံးရင်း “သမီး... ဒါ သမီးအတွက် မေမေအထူးလုပ်ထားတဲ့ “မင်္ဂလာစု”စာအုပ်လေးပါ။ နောင်နောက် အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့နေ့မျိုးမှာ ဒီစာအုပ်ထဲ ငွေနည်းများမဆိုစုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ နောင်အိုမင်းလာတဲ့အခါ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ငွေတွေအပြင် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပါရှိနေလိမ့်မယ်” လို့ပြောပါတယ်။
မေမေပြောတဲ့စကားကို ကျွန်မ အမှတ်တမဲ့ပဲ ထားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မ အမျိုးသားက အဲဒီစကားကို ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ မှတ်သားနေခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးသားက စာအုပ်ထဲ ကျပ် ၅ဝဝ နှစ်ကြိမ် စုလိုက်တယ်။ တစ်ကြိမ်က သူရာထူးတိုးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်က ကျွန်မ ခွဲစိတ်ခန်းက ထွက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အမျိုးသားရဲ့အပြုအမူကို ကျွန်မရယ်မောခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးမိပါတယ်။ ကျွန်မ ကျန်းမာလာတဲ့နေ့ကို သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့လို့ပါပဲ။
သိပ်မကြာဘူး... ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ငွေ၂ဝဝဝကျပ် စုလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် မွေးဖွားလာတဲ့ ရင်သွေးငယ်လေး သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုက ကျွန်မတို့အတွက် တိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကြားထဲ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်မှုနဲ့ အေးစက်မှုက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်လာခဲ့တယ်။ လျှော်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ အနှီးတွေ၊ တိုက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့နို့တွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ခံစားမှုကို ဆိုးသထက် ဆိုးဝါးလာစေခဲ့တယ်။ မေမေ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ “မင်္ဂလာစု” စာအုပ်က အံဆွဲတစ်နေရာမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ မေ့လျှော့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ စာအုပ်ထဲက ပျော်ရွှင်ခြင်းကိန်းဂဏန်းက နဂိုနေရာမှာတင် ရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။
ကွာရှင်းဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ ပြင်ဆင်ကြတော့ မေမေက “အဲဒီစာအုပ်ထဲက ငွေကို သမီးတို့ အရင်ဖြုန်းပြီးမှ ကွာရှင်းကြပါ။ စာအုပ်ထဲက ငွေကသိပ်မများပေမယ့် အဲဒီငွေက သမီးတို့နှစ်ယောက်လုံး ပိုင်တဲ့ငွေဖြစ်တယ်” လို့ပြောတယ်။
စာအုပ်ထဲက ငွေ ၁ဝဝဝကို ကျွန်မထုတ်ယူလိုက်တယ်။ လိုချင်တာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားထုပ်တွေကိုကိုင်ဆွဲရင်း ကုန်တိုက်ထဲကနေ ကျွန်မထွက်လာခဲ့တယ်။ ကုန်တိုက်တံခါးဝအရောက် အရောင်းစာရေးမဆီ ကျွန်မပြန်လှည့်လာပြီး “ဆောရီးပဲ... ဒီပစ္စည်းတွေ ကျွန်မ မယူတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းပေးပါ” လို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
ခေါင်းထဲမှာလည်း ဒီငွေ ၁ဝဝဝ ဟာ ငါတို့ရဲ့ မင်္ဂလာတွေ၊ အမှတ်တရနေ့တွေ၊ အပျော်တွေစုထားတဲ့ ငွေဖြစ်တယ်လို့ ချက်ချင်းတွေး လိုက်မိတယ်။
ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့ကို သူမှတ်မိတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဖိနပ်အတိုင်း၊ ကျွန်မရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်နဲ့ ကျွန်မ ကြောက်တတ်တဲ့ အရာအားလုံးကို သူမှတ်မိနေတယ်။ အဲဒီအတွက် မွေးနေ့တုန်းက ကျွန်မ ၃ဝဝကျပ် စုခဲ့တယ်။
မိန်းမတွေနဲ့ သူကင်းရှင်းတယ်။ ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တဲ့ သူ့လက်အောက်က ဝန်ထမ်းမလေးတွေနဲ့ သူကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေခဲ့တယ်။ အခွင့်အရေး မပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ၅ဝဝကျပ် စုခဲ့တယ်။
ဒီငွေ ၁ဝဝဝထဲမှာ အပျော်တွေ ဒီလောက်စုမိနေပါလား? ဒီလိုဆိုရင် စာအုပ်ထဲစုထားတဲ့ ငွေ နှစ်သောင်းကျော်ထဲမှာ .... ကျွန်မမျက်လုံးထဲ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံလာခဲ့တယ်။
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ စာအုပ်ကို သူ့လက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်ပြီး “ ဒီထဲကငွေတွေ အမြန်သုံးလိုက်၊ သုံးကုန်မှ ကွာရှင်းမယ်” လို့ ကျွန်မပြောလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ရက်ညမှာ ကျွန်မလက်ထဲ ငွေစုစာအုပ်ကို သူပြန်အပ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဖွင့်ကြည့်တော့ ငွေတွေလျှော့မသွားတဲ့အပြင် ၁ဝဝဝကျပ် ထပ်တိုးလာခဲ့တယ်။
“ဒီထဲက ငွေတစ်ကျပ်တစ်ပဲဟာ ငါတို့အတူ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လမ်းကို မှတ်သားထားတယ်။ ငါနင့်ကို အဲလောက်တောင် ချစ်ခဲ့မှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတိထားမိလို့ ငွေ ၁ဝဝဝ ငါထပ်စုလိုက်တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မေမေပြောတဲ့စကားတွေ မှန်ခဲ့ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အကောင့်နံပါတ်ဖြစ်တယ်။ လက်ထပ်ပြီးနောက် လင်မယားကြားမှာရှိတဲ့ အမှတ်တရ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ ရိုမန်တစ်ဖြစ်ရပ်... ဒါတွေအားလုံးကို ဒီအကောင့်ထဲ စုထည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီလို နေ့နေ့၊ လလ အပျော်တွေစုတဲ့ အစုစာအုပ်လေးသာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲတဲ့လက်ထပ်ခြင်းမျိုး၊ ပင်ပန်းတဲ့လက်ထပ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နေခဲ့ပါစေ အခက်အခဲ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်မိပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ (Sunday, October 05, 2008)
တစ်ခါက မိုးပျံပူပေါင်းတွေကို ဈေးပွဲမှာရောင်းပြီးအသက်မွေးသူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ အနီရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ အစိမ်းရောင် တွေအပါအ၀င် မိုးပျံပူပေါင်းရောင်စုံရောင်းပါတယ်။
သူဟာ ဈေးရောင်းမကောင်းတဲ့အခါတိုင်း ဟီလီယံဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ထားတဲ့ မိုးပျံပူပေါင်းတွေကို ကလေးတွေရှေ့မှာ ကောင်းကင်ကိုလွှတ်တင်ပြပါတယ်။ အဲဒါကိုမြင်တဲ့ကလေးတွေဟာ မိုးပျံပူပေါင်းတွေကို ၀ယ်ချင်လာပါတယ်။ ကလေးတွေလာဝယ်ကြတဲ့အခါမှာ သူဟာ ဈေးရောင်းကောင်းလာပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့သူ တနေကုန်အောင်ရောင်းချပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိုးပျံပူပေါင်းရောင်းသမားရဲ့အိတ်ဟာ တစ်နေ့အရောက်မှာ ဖောင်းလာရပါတယ်။
သူဈေးလှည့်ရောင်းနေတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုမေးတယ်။
“ဈေးသည်ကြီး၊ အနက်ရောင်ပူပေါင်းကို လွှတ်တင်လိုက်ရင်လည်း မိုးပေါ်ကိုပျံမှာပဲလား၊ သားမသိလို့” လို့မေးလာပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ မိုးပျံပူပေါင်းရောင်းတဲ့ ဈေးသည်ကြီးဟာ ကလေးငယ်ကို ဂရုဏာသက်စွာနဲ့ အခုလိုဖြေပေးပါတယ်။
“သားငယ်လေးရေ၊ မိုးပေါ်ပျံတက်ဖို့ရာ အရေးကြီးတာ ပူပေါင်းရဲ့အရောင်အဆင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပူပေါင်းအတွင်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အရာပါ။”
ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘ၀တွေဟာလည်း ထိုနည်းတူစွာပါပဲ။ အတွင်းပိုင်းမှာ ရှိသောအရာကပဲ အရေးပါတာပါ။ အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ မိုးပေါ်ကိုပျံတက်စေတဲ့အရာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ သဘောထားပါပဲ။
Source: English-မြန်မာ စာပဒေသာ
ပြုံးပြုံးလေးနေခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
ပြုံးပြုံးလေးနေတာက သင့်ကို ပုံမှန်ထက် ပိုတောက်စေတဲ့အပြင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ အပြုံးကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေး ကို ကောင်းမွန်စေသလို ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျော့ကျကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။
(၁) အပြုံးက သင့်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေ ပါတယ်
လူတွေကို ပြုံးနေတဲ့ပုံဆွဲလိုက်တဲ့အခါ တည်တဲ့ပုံတွေ ထက် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာကို လေ့လာမှုတွေအရ သိရ ပါတယ်။ မျက်မှောင်ကြုတ်တာ၊မျက်စောင်းထိုးတာ စတဲ့ အပြုအမူတွေက မျက်နှာကို ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ပိုရင့် သလို ဖြစ်စေကာ ပြုံးတာက ငယ်နုတဲ့အသွင်ရစေတာ
(၂) အပြုံးက စိတ်ကိုပြောင်းစေနိုင်တယ်
နောက်တစ်ခါ သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ပြုံးကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်ခံစားမှုက အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြုံးတာက စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုပါပဲ။
(၃) အပြုံးက ကူးစက်တတ်ပါတယ်
လူတစ်ယောက်က ပြုံးနေရင် အဲဒီအခန်းက လင်းနေသလိုပဲ တခြားလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပါ ပျော်ရွှင်လာစေပါ တယ်။ ပြုံးနေတဲ့သူဟာ တခြားလူတွေဆီ ပျော်ရွှင်မှုကို သယ်ဆောင်လာတာပါ။
(၄) အပြုံးက စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပါတယ်
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေရင် မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြုံးလိုက်ရင် သင်ရဲ့ ပင်ပန်းစိတ်ဓာတ် ကျပြီး နွမ်းနယ်နေတဲ့ပုံပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၅) အပြုံးက ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်
ပြုံးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ ခုခံအားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေက ကောင်းမွန်သွားတာကြောင့် အပန်းပြေစေပါ တယ်။
(၆) အပြုံးက သွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေပါတယ်
ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ သွေးဖိအားက သိသိသာသာလျော့ကျသွားပါတယ်။ အိမ်မှာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာထိုင်ပြီး
သွေးပေါင်တိုင်းကြည့်ပါ။ တစ်မိနစ်လောက်ပြုံးပြီး ပြုံးနေရင်းမှာပဲ သွေးပေါင်ထပ်တိုင်းကြည့်ပါ။ ခြားနားချက် ကို သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၇) အပြုံးက ကောင်းတဲ့အရာတွေထွက်စေတယ်
လေ့လာမှုတွေအရ ပြုံးတာကြောင့် အန်ဒေါ်ဖင်၊ သဘာဝ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ ဆီရိုတိုနင်စတဲ့
ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေ ထွက်ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြုံးတာကို သဘာဝဆေးဝါး တစ်လက် လို့ ဆိုကြတာပါ။
(၈) အပြုံးက မျက်နှာကို ပင့်တင်ပေးပြီး နုပျိုစေပါတယ်
ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့သုံးလိုက်တဲ့ ကြွက်သားတွေက မျက်နှာကို ပင့်တင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေတာကြောင့် ပိုနုပျိုတဲ့ ပုံဖြစ်သွားစေပါတယ်။
(၉) အပြုံးက အောင်မြင်သူတစ်ဦးလို ထင်ရစေတယ်
ပြုံးနေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရတာ ယုံကြည်မှုပိုရှိတဲ့ဟန်ပေါက်စေပြီး လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်ချရတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ များများပြုံးလိုက်ပါ။ အရင်နဲ့မတူတဲ့တုံ့ပြန် မှုကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
(၁၀) အပြုံးက အကောင်းမြင်စေပါတယ်
ပြုံးပြုံးလေးနေရင်း တစ်ခုခုကို အဆိုးဘက်က တွေးကြည့်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ သင်ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဦးနှောက် ဆီကို “ဘ၀က နေပျော်စရာကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းပေးပို့မှု ရောက်ရှိသွားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြုံးပြုံးလေးနေရင်း စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့ ပူပင်သောကတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အစိုးရက နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုဟု လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြော
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို အစိုးရက နိုင်ငံရေး ကစားကွက် တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိဟု ဒီဇင်ဘာ (၁၁)ရက် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက မီဒီယာများသို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်တွင် ပုဒ်မ ၁၈၊ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် ပြန် လည်လွတ်မြောက်လာသော ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုဒီငြိမ်းလင်းက ““ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုပုံစံ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးသိပါတယ်။ သူတို့က နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ သူတွေဆိုရင် ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးတွေ အထပ်ထပ်တပ်ပြီး အရေးယူခဲ့ကြတာ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အစိုးရက နိုင်ငံရေး ကစားကွက်တစ်ခု အဖြစ် နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာပန်းလှ အောင်လုပ်ပြနေတယ်။ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေဆိုရင် ထောင်ထဲ ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် အမြဲလုပ် ဆောင်နေတာ ပြည်သူတွေအသိ ပါ””ဟုပြောသည်။ …
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းထောင် အသီးသီး၌ အကျဉ်းသား (၄၁) ယောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်။
မတရားသင်းဆက်သွယ် မှုဖြင့် အင်းစိန်အကျဉ်း ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ကိုမျိုးမြင့်အောင်က ““ABSDF အဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး (၆)လပိုင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထောင် ခုနစ်နှစ်ကျခဲ့တာ။ ပြန်လည် လွတ် မြောက်လာတာ ၀မ်းသာရပေမယ့် ထောင်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကို တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ အခုလို ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ တဲ့အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ကို ပြည်သူ တွေက အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်ပါ တယ်”” ဟု ၎င်း၏ ခံစားချက်ကို မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အကျဉ်းသားများကို (၁၄)ကြိမ်မြောက်လွှတ် ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၃၀၀ကျော်ခန့် ပြန်လည်လွတ် မြောက်ပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (AAPP) ကိုဘိုကြည်က ““အစိုးရက အကျဉ်း သားတွေ လွှတ်တိုင်း နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားပွဲတွေ၊ နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ တိုင်းမှာ အကျဉ်းသား တွေကို လွှတ်ပေးနေတာ ဝေဖန်စရာပါ။ သမ္မတကြီးရဲ့ စကားကလည်း မေးခွန်း ထုတ်စရာကောင်းနေပြီ။ ဒီဇင်ဘာ လကုန်မှာ အကျဉ်းသားတွေအကုန် လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အကျဉ်းသား (၄၄)ယောက်ရဲ့ ပုဒ်မတွေကလည်း အငြင်းပွားနေဆဲပဲ။ ပြီး တော့ ပုဒ်မ (၁၈)၊ ၅၀၅(ခ)နဲ့ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေက (၂၀၀)ကျော်လောက်ရှိတယ်””ဟု ပြော သည်။
ရ၅%ဒီမိုကရေစီဖြစ်သယောင်လုပ်ထားသော်လည်းအမှန်မှာ ၀% ဒီမိုကရေစီဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။
ရ၅% ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်သယောင်လုပ်ထားသော်လည်း အမှန်မှာ ၀% ဒီမိုကရေစီဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ ၁၀၀% အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာစစ်ပညာလုံးဝမသင်ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတောင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်
ကာမန်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန် ခုနစ်လ နဲ့ ပါ၊ သူကျွမ်းကျင် တာ က စစ်ပညာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဥပဒေ ပိုင်းပါ၊ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ အထူးပြုပြီး ယူထားပါတယ်၊ သူက နိုင်ငံရေး သမား ပါ၊ သူ့ပါတီက အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာ နဲ့ သူ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်က ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးတာဝန်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေကို တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးမှုကို ပါ အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ မှာ သူ့ ဝန်ကြီးချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ၂၀၁၂ သူတို့ ပါတီညီလာခံမှာ အရေးကြီးဆုံးရာထူး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူးကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ၂၂မဲထဲ ကပ်ရှုံးခဲ့ပါတယ်၊ အခုထိပါတီမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာ မှာ တာဝန်ယူထားပါတယ်၊ သူက ကတ်တလန် ဒေသကို လွတ်လပ်စွာ ခွဲထွက်မှုကို ဆန့်ကျင်သူလို့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။
သူ့အကြောင်း ပြောချင်တာက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး၊
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ စစ်ပညာ လုံးဝမသင်ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို တောင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ မှာက တော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို ကာချုပ်က သာ ခန့်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
2008 မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တဲ့ မတူညီတဲ့ အခြေအနေလေးတွေပါ။
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၅
နေပြည်တော် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအား ကစားကွင်း၌ပြုလုပ်နေသောဆီးဂိမ်း
ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမြားပစ်အဖွဲ့ ချုပ်အတွက်ပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ဆု ကိုမြားပစ်ရွှေတံဆိပ်စံချိန်ရှင်မအောင် ငှိမ်းကယနေ့ရယူပေးလိုက်သည်။
မြားပစ်အားကစားမယ်မအောင် ငှိမ်းသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း Compound ပြိုင်ပွဲတွင် ရမှတ် ၁၃၈မှတ်ဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပြိုင်ဘက်ကို ၈ မှတ်အသာရကာ ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေ တံဆိပ်ဆုရှင်မအောင်ငှိမ်းကိုမြန်မာ နိုင်ငံမြားပစ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုး ကိုကိုတင့်ဆန်းကကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ဆုချီးမြင့်သွားမည်ဟုသိရသည်။
ရွှေတံဆိပ်ဆုရမြန်မာ၊ငွေတံဆိပ် ဆုရ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကြေးတံဆိပ် ဆုရ မလေးရှားကစားသမားများ ကိုအားကစားဝန်ကြီးဌာနျပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်းနှင့်ဦးဖြိုးကိုကို တင့်ဆန်းတို့က ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
မအောင်ငှိမ်းက''ရွှေတံဆိပ်ဆု ကတော့ နောက်ထပ်ပြိုင်စရာ ရှိပါ သေးတယ်။အဲဒါတွေကိုလဲရဖို့မျှော် လင့်ထားပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် နိုင်ငံတကာ ရွှေတံဆိပ်က ဒါနဲ့ဆို (၂၇)ခုမြောက်ပါ။
ဆီးဂိမ်းရွှေတံဆိပ်အနေနဲ့ကတော့ (၅)ကြိမ်မြောက်ပါ။ ရွှေတံဆိပ်ကို ရယူနိုင်မယ်လို့တော့ ယုံကြည်ထား ပေမယ့် သေချာတာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူးလေ။ အခု ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ခုပြိုင်ပွဲမှာ ကွာ တားဖိုင်နယ်မှာ ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့စင်ကာပူ ကတစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်ခက် ခက်ခဲခဲပြိုင်ယူခဲ့ရပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
မအောင်ငှိမ်းသည် နိုင်ငံတကာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ၂၆ဆု ရယူထားပြီး ယခုဆုမှာ ၂၇ ဆု မြောက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြားပစ်အဖွဲ့အနေ ဖြင့် ယနေ့ပြိုင်ပွဲတွင် ကြေးတံဆိပ် တစ်ဆုသာရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်တွဲ ပြိုင်ပွဲတွင် အောင်ငှိမ်းတို့အတွဲက ရယူပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၈.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့၂၀၃၀အချိန်ဣစ္ဆိတံဆယ်လုံးတန်းရှေ့တဲတန်းလျား (ကျူးကျော်) (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံတောင်မြို့နယ်နေသူ ကျော်ဝင်းနိုင်သည် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ မပပခိုင်နှင့် စကားပြောနေစဉ် လှမြိုင် (ဘ)ဦးတင်လှိုင် (လိပ်စာတူ)မှ “ဟေ့ကောင်“ စိုးနိုင်လားဟုပြောဆိုကာ ဓါးဖြင့်ထိုးသဖြင့် ကျော်ဝင်းနိုင် တွင် ယာဘက်နံဘေးပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိပြီး ကျော်ဝင်းနိုင်မှ ၎င်း၏အစ်ကိုဖြစ်သူ စိုးနိုင်အား “အစ်ကိုလေး လှမြိုင်မှ ဓါးဖြင့်ထိုးသွားလို”ဟု ဟော်ဟစ်ပြောဆိုရာ စိုးနိုင်(ဘ)ဦးထွန်းနိုင် (လိပ်စာတူ)မှ ရောက်ရှိလာပြီး လှမြိုင်နှင့်လုံးထွေးသတ်ပုတ်စဉ် လှမြိုင်မှ စိုးနိုင်အားဓါးဖြင့်ထိုးသဖြင့် ၀ဲရင်အုံထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ၀ဲနံဘေးထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ၀ဲလက်မောင်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၁)ချက်ရရှိပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ပို့အပ်စဉ် စိုးနိုင်မှာသေဆုံး သွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ကျော်ဝင်းနိုင်အား ပြင်ပလူနာအဖြစ် ကုသရသောကြောင့် စိုးနိုင်၏ဇနီးဖြစ်သူ မဇင်မာစိုးမှ လှမြိုင်အား အရေးယူပေးပါရန်တိုင်တန်းသဖြင့် ဒဂုံတောင်မြို့မရဲစခန်း
(ပ)၁၀၃၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၄ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့သော အမှုဖြစ်ပါသည်။
အမှုမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသောတရားခံအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ဒဂုံတောင်မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သတင်းအရ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ကျောင်းစုအုပ်စု၊ တော်ကွဲကျေးရွာသို့ သွားရောက်စုံစမ်းဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၃.၁၂.၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် လူသတ်တရားခံ လှမြိုင်အားဖမ်းဆီးရမိပြီး အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဂုဏ်ရည်အေးကျော် Missiology ကပေးသည့် အင်တာနက်ဆု ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်နေ
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Miss International 2013 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ် စားပြုအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် ဂုဏ်ရည်အေးကျော်သည် Missiology ကပေးသည့် အင်တာ နက်ဆုတွင် ပထမနေရာတွင် ရောက်ရှိနေသည်။ ယင်းဆုသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် နောက်ဆုံးပေးခဲ့ သည့် People Choice Award ဆုအတွက် အွန်လိုင်းမဲပေးစနစ် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမဲပေးစနစ်တွင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် နှစ်မျိုးရှိပြီး Result အဖြေမမြင်ရသည့် ဂျပန်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင် တစ်နေ့လျှင် သုံးဦးအထိ မတူညီသည့်သူသုံးဦးကို Vote ပေးခွင့်ပြုထားပြီး နောက်ထပ်မဲပေးနိုင်သည့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သည့် Missiology တွင် ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ၈၁၆၇ မှတ်မဲများဖြင့် ဦးဆောင် နေခြင်းကို တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ စတင်ထွက်ခွာ သည့်အချိန်ကစပြီး စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်သည့်ကာလကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါတွင် နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲကို တက်ရောက်နိုင်ရန် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
“မအားလပ်တဲ့ကြားထဲက ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာအသင်းကို အားပေးနေသလို Miss Myanma ကို Vote ပေး နေကြတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ဂုဏ်ရည်ပရိသတ်များအတွက်လည်း Miss Myanmar 2013 ဂုဏ်ရည် အေးကျော်မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း” ကို ယင်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာထက်တွင် ရေးသားဖော် ပြထားသည်။
ယင်းသည် Miss International 2013 ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား၊ Miss တစ် ယောက်၏ လမ်းလျှောက်ပုံ၊ ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုများကို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးTalent Show အတွက် လည်း မြန်မာ့စောင်းတီးခြင်းကို လေ့ကျင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပြောပြ ရန်အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပုဂံအကြောင်းအရာများကို လေ့လာထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြောင်းအရာ များကိုလည်း မသွားခင်တွင် လေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင် အလှမယ်ပေါင်း ၆၇ ဦး ပါဝင်ပြီး (၅၃)ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသည့် Miss International ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်က တစ်ဆင့် တိုက် ရိုက်ကြည့်ရှုရမည် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Miss Photogenic ဆုကို Lithuania - Elma Segzdavi-ciute အလှမယ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါMiss International ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် နန်းခင်ဇေယျာက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာတွင် ဆုများစွာရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆိုးတေး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ကားမတော်တဆဖြစ်ခဲ့စဉ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ကားမတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည့် အဆိုတော် ဆိုတေး၏ ကျန်းမာရေး အခြေ အနေသည် များစွာတိုးတက် ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ယခုအခါတွင် သွားလာလှုပ်ရှား နိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်း ဆိုတေး၏မိခင်ဖြစ်သူက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
“အန်တီတို့တွေ သူ့ကို တော်တော်လေးကို ဂရုစိုက်ပြီး ပိုးမွေးသလို မွေးနေရပါတယ်။ ဒူးက ဒဏ်ရာလဲ တော်တော်လေးကို သက်သာသွားပါပြီ။ နောက်ပြီး ဗိုက်က ဒဏ်ရာကြောင့် အစာတော့ သေချာမစားနိုင် ပေမယ့် အရင်ကထက်စာရင် စားနိုင်ပါပြီ။ သူ့ကို နားနားပြီး ကျွေးနေရပါတယ်။ ဗိုက်က ခွဲထားတာဆို တော့လေ။ အနာတွေတော့ ကျက်နေပါပြီ။ သူအပြင်သွားချင်ရင် အစ်ကိုတွေက ကားမောင်းပြီး လိုက်ပို့ ပေးပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းသည် လွန်ခဲ့သည့်ငါးလက နေပြည်တော်အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် အစားအစာများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုစားလာနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း နားနားပြီးမှ စားသောက်နိုင်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဆိုတေးအနေဖြင့် မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး တစ်လလောက်အကြာတွင် သတိ ပြန်လည်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် မတော်တဆမှုများ၊ ဆိုတေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်အကြောင်း အရာများကို ယခုအချိန်ထိ အသိပေးထားခြင်း မရှိသေးဟု ဆိုသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရခြင်းသည် ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ဆောင်ရွက်နေကြရခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် ဆိုတေးသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် လမ်းအနည်းငယ် လျှောက်နိုင်နေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် သူနာပြုဆရာမနှင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ယင်းအပြင် ၎င်း၏ ၀ါသနာဖြစ်သည့် သီချင်းရေးခြင်း၊ ဂစ်တာတီးခြင်းများကိုလည်း စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဆိုတေးသည် လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် New Year တွင် ဆေးကုသပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်ကြီးများ၏ တောင်း ဆိုချက်ကြောင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေကို အနုပညာနယ်ပယ်မှ သူငယ်ချင်းများသည် ယခုအချိန်ထိ သွားရောက်ကြည့်ရှု အား ပေးလျက်ရှိသည်ဟု မိခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
ယင်း၏ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ မည်သို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည်ကို ပရိသတ် များ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်။အဆိုတော်ဆိုတေးသည် မတော်တဆဖြစ်ပြီးနောက် သတိပြန်ရချိန်နှင့် ယခုနောက်ပိုင်းအချိန်ထိ သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းသည် စိတ်ဓာတ် မာကျောခြင်းကြောင့်သာ ကောင်း မွန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။